Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0612 lah
Ohatry ny fiangonana tany Jodia (1 Tes 2:13-16)
Alahady 05 Aog.
Raha vakina fotsiny amin’izao tsy halalinina ny 1 Tes. 2:13–16 dia toa mivaona amin’ireo lohahevitra teo aloha momba ny fahazoana sitraka amin’Andriamanitra sy ny fikolokoloana ireo mpino vaovao (1 Tes. 2:1–12). Kanefa ny and. 13 dia miresaka ny amin’ny fomba nandraisan’ireo Tesalônianina ny hafatry ny apôstôly sy ny filazantsara izay notoriny tany Tesalônika.
Iverenan’i Paoly ny resaka momba ny fanahafana eo amin’ny and. 14. Ny fanenjehana tany Tesalônika dia akon’ny fanenjehana izay nisy talohan’io tany Jodia. Nisy ireo Jiosy izay nanenjika ny Jiosy kristianina tany Jodia, ary ny Jentilisa sy ny Jiosy tany Tesalônika dia nanenjika ireo Kristianina sy Jentilisa tao amin’io tanàna io. Asehon’i Paoly eto fa ny fanenjehana ny Kristianina dia tafiditra ao anatina sehatra lehibe kokoa. Ireo izay manara-dia an’i Kristy dia hiatrika fanoherana, eny fanenjehana mihitsy aza.
Vakio ny 1 Tes. 2:14–16. Inona no hafatra tokony horaisintsika ankehitriny avy amin’io andalan-teny io? Inona kosa no tsy ampianarin’io andalan-teny io mihitsy?
Ambaran’i Paoly eto ny fahatsapana tao anatiny mikasika ireo antokona Jiosy izay nanohitra hatraiza hatraiza ny fitoriany ny filazantsara ka namafy fizarazarana sy fanoherana teo anoloan’ireo apôstôly. Misy ireo andalan-teny ao amin’ny Baiboly tahaka io (jereo koa ny Mat. 23:29–38) izay naolana sy navily an-kitsirano mba “hanamarinana” ny fanenjehana ny vahoaka jiosy. Kanefa izany fampiharana ankapobeny izany dia tsy mifanaraka amin’ny fikasan’i Paoly raha nanoratra io andalan-teny io izy. Ny resahin’i Paoly ao amin’io andalan-teny io dia ny momba ireo manam-pahefana tany Jodia (ny teny nadika hoe “Jiosy” ao amin’ny 1 Tes. 2:14 dia azo adika koa hoe “mponina tany Jodia”) izay niray tetika tamin’ny Rômanina tamin’ny namonoany an’i Jesôsy ary nikendry ny hisakana ny fitoriana ny filazantsara tamin’ny toerana sy ny fotoana rehetra nahafahan’izy ireo nanao izany. Raha ny marina, dia toa manamafy izay efa nolazain’i Jesôsy mikasika ireo izay niezaka hamono Azy (Mat. 23:29–36) i Paoly.
Tokony ho ao an-tsaintsika mandrakariva fa Jiosy i Paoly. Tsy nanaratsy sokajin’olona iray manontolo izy tsy akory. I Jesôsy koa dia Jiosy. Ireo mpianatra voalohany koa dia Jiosy. Ireo olona nandrafitra ny fiangonana voalohany dia Jiosy. Raha ny tao am-pon’i Paoly dia tokony ho sakaiza ho amin’ny mandrakizay avokoa ireo Jiosy izay nifanerasera taminy, toa an’i Silasy sy i Barnabasy ary i Timoty (jereo ny Rôm. 9:1–5; 11:1–12,24–32).
Ny olona rehetra eto an-tany dia fanahy izay “nanoloran’i Kristy ny ainy” (Rôm. 14:15;1 Kôr. 8:11). Ny fananana fisainan-dratsy momba ny sokajin’olona sasany dia tsy sahaza ireo izay miaina eo am-pototry ny hazo fijaliana. Hatraiza ny fisian’ny fisainan-dratsy ara-poko ao am-pontsika?